Noely Ambanivohitra [sary sy lahatsary] | Hevitra MPANOHARIANA
misaotra betsaka nampita vaovao fa tena nahatsiaro ny fiangonana any @ nay aho fa any akaikinay io ary hotrany zao ny fankalazana ny frismasy any ny hariva moa dia ny fanaovana ARBRE de NOEL sy fizanana kilalao hoany ankizy ny aliny 24 decembre dia alina masina misy fanaovana tantara ny naterahany JESOSY ka ny tanora rehetra sy ny mpandray fanasany TOMPO no manao izany dia mirava @ 12 alina dia mifampiarahaba tratrany NOEL eh! iny SAMBNAM sy lazaina ary sahafa sy Anosiarivo iny no mba Ambanivohitray eh ! niririavanay ka hatrany AMBOHIMANGA ....ary aiza ilay mihira ny avy ary mino hifaly sy hiolby sns...... misaotra betsaka fa natohina ny fo ny nahita ny fiangonana mifanolombodirindrina @ nay eh! any zay ny any @ nay!!!!!
Nampidirin'i volaniaina @ 20:57, 2011-12-25 [Valio]
Mba dadany tokoa raha sambany ianao vao mba nanao noely ambanivohitra. Ny anay koa any avarabaratra any, ilay atao hoe Manandriana Avaracrano.
Nampidirin'i Kdaombaramita @ 09:51, 2011-12-26 [Valio]
Any tanàna any...
Misaotra fa dia mamerina ny sary efa ela ireto sary ampitainao.
Miarahaba anao tratry ny krismasy sy ny taona vaovao indray e!
Nampidirin'i Lalasoa @ 01:08, 2011-12-27 [Valio]
Mahafinaritra ny Noely Ambanivohitra
Ny Noely Ambanivohitra no tena nahazatra ahy hatramin'izay, tany foana (Isahafa) no nanao sasak'alina, arbre de noel t@ mbola kely. Hafa ihany ny Noely Ambanivohitra, mampahatsiahy ny fiainana t@ mbola kely.
Nampidirin'i mammysou @ 05:59, 2011-12-27 [Valio]
Dia mamerina ny arahaba ho antsika rehetra ihany koa ary mirary soa!!!
Nampidirin'i jentilisa @ 14:56, 2011-12-27 [Valio]
Miarahaba antsika rehetra e!
Izay aho vao nahita ity blogy ity fa nilazain'i Pasteur Marka teo. Ny tanananay mihitsy io. Raha misy tianao ho fantatra na fifandraisana hafa jereo www.isahafa.blospot.com
Nampidirin'i Ndrina @ 18:39, 2013-01-15 [Valio]